Nangona ulwalamano oluqinileyo lunokutshabalalisa imibuzo engapheliyo. Le mibuzo yifanele ukuba ungayi kubuza iqabane lakho ukuba lingabi nzala. Thina bafazi "bafumana" izilumko kwimibono yabo yeembono ezixhalabisa kakhulu. Kwaye ezinye iimpendulo ziya kubakhokelela ekubeni ekupheleni, siya kugcina sibonakala sisikhangayo kubo.
Ngaba ndikhangeleka? Okanye ndifumene?
Okona ubuncinci, imiba enxulumene nokubukeka ibingxube kwaye ayibi. Awufanele ugxeke ukubonakala kwakho nomfana, kuba uya kuthatha yonke into ngokoqobo kwaye uqaphele ukuba awuphelelanga kwinto ethile. Abafana bathanda amantombazana athembele ngobuhle babo kunye nabo. Amantombazana anzima ngokubonakala ngathi ahamba.
Ucinga ntoni ngoku?
Ngokuqhelekileyo abantu bacinga nantoni na malunga nayo yonke into, malunga nantoni na ekhonkco, ngoko ke umnqweno wokufunda oko ucinga ukuba uyamcasula. Ngokuqhelekileyo amadoda ayiphendula lo mbuzo ngokucacileyo kwaye athi: "Akukho nto." Ukuba "u-sweel" umbuzo onjalo, uya kuyika ukuba uya kufumana iingcamango zakhe. Kutheni kufuneka akuxelele izinto zobuqu? Wena ngokwakho ulungele ukuxelela loo mntu into engqondweni yakho? Ukuba akunjalo, ke gcina uxolo.
Bangaphi abantwana esiya kuba nabo?
Awudingi ukubuza lo mbuzo ukuba awunayo imini yomtshato okanye ulwalamano lwakho lusekuqaleni. Kufuneka ujabulele ulwalamano lwakho ngoku, ngaphandle koko awuyi kuphinda ubone iqabane lakho. Ngokukhawuleza xa ebonisa intaba yeentlanzi, ubusuku obungalali kunye nokulila kwangunaphakade, uya kubaleka nje kuwe. Musa ukuyikrakra loo nto ude utshatile. Mhlawumbi akayi kutshata?
Ngaba uyamthanda umama okanye mna?
Ubuhlobo obuhlukeneyo phakathi kwakho kunye nolwalamano lwenyana nomama, ngoko akunakwenzeka ukuphendula lo mbuzo. Lo ngumbuzo ongafanelekanga. Uthando lukaMama luhlala nathi ngonaphakade kwaye lubangelwa ubisi lomntwana. Lo luhlobo luthando-uthando. Olunye uluthando olungakhiwa ngothando. Ngoko ke, olu luthando aludingi ukufaniswa. Uyamthanda unina kunye nawe.
Ngaba undithanda ngokwenene?
Musa ukunyanzelisa yonke iminini yekhwenkwe yakho ukuvuma kuwe ngothando, kuba ukhetha izenzo, kungekhona amagama.
Uza kutshata nini na?
Musa ukukhwela iqabane lakho xa engathembekanga kuwe, akazukufezekisa iinjongo zakhe, akakulungeli ukuwela umgca wobudlelwane obunzulu kwaye kusekuqaleni ukuthetha ngomtshato.
Ngaba uthanda umlomo wam omtsha?
Njengomthetho, amadoda ayayiqondi iimveli zendalo ze-cosmetology kwaye xa beva imibuzo efanayo, bacasulwa.
Undithandi kangakanani na?
Uthando alulinganiswa ngamandla.
Ngaba ulungile kunye nam?
Ukuba uthe kufuphi nawe, kuthetha ukuba ukuba kwakungalungile, wayeyishiya ixesha elidlulileyo. Okanye udinga ukucaciswa ukuze athi: "Uxolo, ndithandwa, ndiziva kakuhle ngoku, kodwa xa kukubi, ndiya kuhamba."
Awuboni nantoni na?
Oku kusebenza kwiinkcukacha ezincinci njengeipolisi ezintsha, izicathulo ezintsha, umbala omtsha wezithunzi kunye nokunye. Abafana, njengomgaqo, musa ukuqwalasela ezi nkcukacha.
Bangaphi abesifazana obenakho phambi kwam?
Kutheni ufuna ukukwazi oku, kuba bekuye kuwe. Yaye ukuba uyakubuza umbuzo ofanayo? Musa ukukhupha umlotha wexesha elidlulileyo uze uphile ngoku.
Yiyiphi na bam bahlobo ocinga ukuba i-sexy?
Ukuba awufuni ukulahlekelwa uxolo lwakho, akufanele ucele lo mbuzo. Uyakuthanda njani ukuba ubiza umntu kwiintombi zakhe ezitshatileyo. Emva koko uya kucinga ukuba ukuba awukho, uya kuphulaphula intombi yakho. Awufuni ukufumana ubuhlungu be-paranoid?
Kutheni ucinga ukuba kufuneka akuxelele? Ukuba ufuna, uya kukuxelela. Musa ukumcaphukisa ngokungakholwa.
Amadoda acasulwa xa ibhinqa lizama ukuyilawula. Umfazi onqabileyo uya kubamba ukuba angayi kubuza lo mbuzo. Nangona kunjalo ubeka ingozi ekuvezeni ukunyaniseka ngokuphendula. Kwaye nokuba uphendule umbuzo wakho, akuthethi ukuba akacaphukisi kwaye uyathula, kwaye akunakwenzeka ukuba uya kukwazi ukulawula konke ukuhamba kwakhe.
Musa ukubuza le mibuzo kumntu, ukuba awufuni ukuba acaphuke, zama ukukhumbula kwaye ungababuzi.
Uvavanyo lwamadoda nabasetyhini
7 iincwadi zokubhala ezingavamile
Ngaba indoda yam ilungele ubuhlobo obunzulu
Uthando olungunaphakade - ndihlala kuthanda
Kutheni ngamanye amaxesha sinobuqhetseba kumfutshane?
Indlela abafazi abafunda ngayo ukuhamba kwindawo
Musa ukukhathazeka, uyavuya: njani ukuba ube ngumfazi onoyolo
Indlela yokupheka intliziyo yengulube?
Iintlanu eziphezulu kakhulu zixoxwa ngemitshato yeenkwenkwezi zasekhaya ngo-2015
Bruchetta nge-chickpeas puree
Yintoni enokuyenza kwi-aloe: Ubuso kunye neenwele ezinobisi kwi-aloe juice
I-Hamburger eneenkomo zomhlaba kunye nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
U-2010 ngumnyaka we-tiger. Yintoni oyifunayo ukuba uyazi ngaye?
Iibhatateshi zibhaka ngeeshizi
Biography kaBarbara Brylska
Isaladi kunye neflett yenkukhu, iinanapple kunye nesiliva
Piyesi ye-Onion Pie
Intlanzi kwivenkile yeebini ezininzi
Umyeni kufuneka adunyiswe
Iimpawu Zobumnandi beMantombazana
Usuku lukaValentine luka-2016: okokunika, ukuthokoza kwangaphambili kwivesi kunye neprose
Indlela yokugcoba iingubo zendoda yesiganeko intombazana ezandleni zayo?
I-Roulette kunye ne-herring kwi-Old Age Year